ခရီးသွားဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာမခံသည်လိုအပ်နေသောူပည်သူ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ခရီးသွားဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာမခံသည်လိုအပ်နေသောူပည်သူ
တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ခရီးသွားလာ ပြည်ပမှာအတွေ့အကြုံများ၏ခန့်မှန်းရခက်ဖြစ်ပါသည်. သင်တစ်ဦးနိုင်ငံခြားပြည်သွားလာသည့်အခါ, သငျသညျထိတွေ့ပါလိမ့်မည် ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများ, setting များကို, နှင့် အတွေ့အကြုံများ. သငျသညျအခြို့သောလုပ်ပေးရင်တောင် သုတေသန, သင်ရှာတွေ့သောအရာကိုအချို့တို့ကအံ့သြစရာများကခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့သေချာ. ကံမကောင်းသဖြင့်, အားလုံးမဟုတ်သင်ကြုံတွေ့ရသည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသူမြားဖွစျနိုငျသ, သငျတို့သဖြစ်ကြသည်လို့ အားလပ်ရက်အပေါ် သငျသညျအန္တရာယ်မှကိုယ်ခံစွမ်းအားများမှာမဆိုလိုပါ.
သင်တို့သည်ဤကံမကောင်းသင်သည်ဖြစ်ပျက်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ချင်မပြုစေခြင်းငှါ, သင်မူကား, သင်တို့ကိုဖြစ်နိုင်ခြေအဘို့ပြင်ဆင်ဖို့လို, သို့မဟုတ်ချစ်ရသူတစ်ဦး, စဉ်ဝေးနေအိမ်ထဲကနေဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုတောင်းမည်. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့သွား chipping ကဲ့သို့ရိုးရှင်းရှိမရှိ, သင့်ရဲ့ခြေကျင်း spraining, အဖျားတက်ခြင်းနှင့်အတူဆင်းခြင်း, သို့မဟုတ်နှလုံးရောဂါရှိခြင်း, သင်လိုအပ်သည့်ဆေးကုသမှုခံယူကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဖြစ်လိမ့်မည်ကဲ့သို့လွယ်ကူသောမဖြစ်စေခြင်းငှါ,.
အများဆုံးရိုးရာကျန်းမာရေးအာမခံအစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်မြေပေါ်တွင်ဖြစ်ပျက်ကျော်လွန်လွှမ်းခြုံတိုးချဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာသင်ရေခြားမြေခြားကိုလက်ခံရရှိသည့်စောင့်ရှောက်မှုများအတွက်ဆေးဝါးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ၏များအတွက်ချိတ်အပေါ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတယ်. အဘယ်သူမျှမခရီးသွားခရီးသွားဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာမခံမပါဘဲဖြစ်သင့်အဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ. ဘယ်မှာသင့်ရဲ့ပြည်တွင်းလွှမ်းခြုံမဒါတွေကအထူးပြုအစီအစဉ်များကိုသွားပါလိမ့်မယ်, သငျသညျနိုင်ပါလိမ့်မည်သေချာ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုခံစား ခန့်မှန်းရခက်ဖွအကြောင်းကို.
ပိုမိုသိရှိရန် ခရီးသွားသတင်းအချက်အလက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာမခံနှင့်ဘာကြောင့်၎င်းကိုရယူရန်စဉ်းစားသင့်သနည်း, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပါရှိသောလမ်းညွှန်တွေ့မြင်.
•တစ်ဦးမှနယ်လှည့် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည် မြောက်မြားစွာကျန်းမာရေးအန္တရာယ်မိတ်ဆက်ပေးနိုငျသညျ. ဥပမာ, ရေရဲ့အရည်အသွေးအတူတူပင်ဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ, လေးနက်သောရောဂါကူးစက်မှုမှဦးဆောင်. ကွဲပြားခြားနားသောရာသီဥတုသင့်ရဲ့ Pre-ရှိပြီးသားအခြေအနေများတင်းမာလာနိုင်စေခြင်းငှါ, ထိုကဲ့သို့သောနှလုံးရောဂါသို့မဟုတ်ဓာတ်မတည်အဖြစ်, အခြေအနေကကိုင်တွယ်ရန်နေမကောင်း-တပ်ဆင်ထားသငျသညျထွက်ခွာ.
•သင်ပြီးသားကျန်းမာရေးအာမခံရှိသည်ရင်တောင်, ဒါကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပရှိသငျသညျအဖုံးကိုမပြုစေခြင်းငှါ. ဒါကပြည်ပခရီးသွားလာအလွန်မြင့်မားသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းများကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့နေချိန်မှာသင်တွေ့ကြုံခံစားမဆိုရောဂါသို့မဟုတ်ဒဏ်ရာကိုဆိုလိုသည်.
•သင်ကမ္ဘာ၏တစ်ဦးဝေးလံသောအစိတ်အပိုင်းကိုသွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်ချက်ချင်းဆေးကုသမှုလိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်, သင်တစ်ဦးဆေးရုံကိုရွှေ့ပြောင်းခံရဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်. သငျ့လျြောသောအာမခံလွှမ်းခြုံမပါဘဲ, ဒီကိုအခြားဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ်၏ထိပ်ပေါ်မှာသောင်းချီဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကုန်ကျနိုင်ပါတယ်.
အချို့သောအခြေအနေများတွင်•, သင်သည်သင်၏ခရီးစဉ်ကြာချိန်များအတွက်ခရီးသွားကျန်းမာရေးအာမခံရှိသည်ရန်လိုအပ်သည်စေခြင်းငှါ. ဥပမာ, ရုရှားဧည့်သည်များ, ကျူးဘား, နှင့်အီးယူ၏ Schengen ဧရိယာထဲမှာလူအမျိုးမျိုးသူတို့လွှမ်းခြုံထားသောသက်သေပြရမယ်.
•ခရီးသွားကျန်းမာရေးလွှမ်းခြုံအလွန်တန်ဖိုးရှိသောနိုင်ပါတယ်သော်လည်း, ဒါကြောင့်ပုံမှန်အားထက်လျော့နည်းဘို့အကောင့် 10 ကဝယ်ယူအားလုံးခရီးသွားအာမခံထုတ်ကုန်များ၏ရာခိုင်နှုန်းက ခရီးသွားများအတွက်, အတော်လေးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဖြစ်ခြင်းစဉ်.
•ကဖျက်သိမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ကျစရိတ်များအတွက်လွှမ်းခြုံပေးမထားဘူးသောခရီးသွားဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာမခံအဓိကအားစံခရီးသွားအာမခံမူဝါဒများကနေမတူ, နှောင့်နှေး, သို့မဟုတ်ကြားဖြတ်.
•ခရီးသွားဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာမခံနှင့်အတူ, သငျသညျတခုမမျှော်လင့်ဘဲကျန်းမာရေးအရေးပေါ်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်လွှမ်းခြုံရှိနိုင်ပါသည်. ဤရွေ့ကားအစာအဆိပ်သင့်တဲ့ကျိုးပဲ့သွားသို့မဟုတ်ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းကနေအသက်အန္တရာယ်ခြိမ်းခြောက်ဒဏ်ရာနှင့်နှလုံးတိုက်ခိုက်မှုအထိနိုင်ပါတယ်.
•ဤမူဝါဒများမူလတန်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုတစ်ခုမှာသူတို့နှင့်တကွသင်ပေးကြောင်း 24/7 သင်တစ်ဦးကနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုန်ထမ်းများနှင့်အတူညှိနှိုင်းကူညီပေးဖို့ဘာသာပေါင်းစုံထောက်ခံမှု.
•အဲဒီမူဝါဒများပုံမှန်အားဖြင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသော့ချက်စဉ်းစားသည်အရာကိုလွှမ်းခြုံပေး ကုန်ကျစရိတ်. ဤရွေ့ကားအရေးပေါ်ခန်းလည်ပတ်မှုတို့ပါဝင်သည်, ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု, နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး သင့်လျော်တဲ့ဆေးဝါးကုသမှုစက်ရုံရောက်ရှိဖို့မည့်ကုန်ကျစရိတ်.
•အသုံးအများဆုံးအစီအစဉ်များတစ်ခုတည်းခရီးစဉ်ကိုဖုံးလွှမ်း, ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းနေသမျှကာလပတ်လုံးအဖြစ်ကာလကိုဖုံးလွှမ်းရန်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် 12 လများ. လည်းမကြာခဏသို့မဟုတ်တိုးချဲ့ကာလအဘို့ခရီးသွားလာသူများအတွက်ရေရှည်ဆေးဘက်လွှမ်းခြုံလစဉ်တိုးမြင့်အတွက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “ဥရောပမှာအများစုကအံ့မခန်းတက္ကသိုလ်များ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthe-need-for-travel-medical-insurance%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများ / es ဖို့ / fr ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်နိုင်ပါတယ်.
PDF ကိုကဒီမှာ Download လုပ်ပါ အားဖြင့်တစ်ဦးကရထား Save ပေးခဲ့ပါသည်သောဤဆောင်းပါးအဘို့ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်၏အကြီးတန်းန်ဆောင်မှုများ
#အာမခံ #ခရီးသွားအာမခံ ခရီးသွား
Jenn သည်အာမခံလုပ်ငန်းတွင်စတင်ခဲ့သည် 2007. သူမ၏ပထမနှစ်တွင်, သူမကထိပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် 10 အကြီးဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးအာမခံအေဂျင်စီများနှင့်အတူတိုင်းပြည်အတွင်းထုတ်လုပ်သူ. အီလီနွိုက်စ်တွင်နေထိုင်ပြီးသူမ၏အလုပ်ကိုသူဆက်ပြီးအာရုံစိုက်သည်, မိသားစု, နှင့်ခရီးသွားလာ. - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ